Daawo : Xildhibaano ku dhagan Ra’iisul Wasaare Sharmaake - iftineducation.com
iftineducation.com – Xildhibaan Cabdi Barre Yuusuf Jabriil oo kamid ah Baarlamaanka Soomaaliya islamarkaana ka soo horjeeday Mooshinkii ay Codka ku weysay Xukumaddii hore ee C/wali Sheikh Axmed Maxamed ayaa digniin u diray Ra’iisul Wasaaraha Cusub ee Soomaaliya.
Halkaan RIIX ka DAAWO Warkooban
Cabdi Barre Yuusuf ayaa ugu baaqay Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaake in uusan Xukumadiisa ku soo darin Wasiiradii Xukumaddii C/wali Sheikh Axmed ee sheegay Xiligii Khilaafka in ay iscasilayaan hadii uusan Ra’iisul Wasaaruhu Xilka ka dagin iyo Xildhibaanadii u ololeenayay in Xukumaddaasi la rido.
Xildhibaan Cabdi Barre ayaa sheegay in hadii ay taasi dhacdo uu Cumar C/rashiid Sharmaake la Kulmi doono Cawaaqib Xoogan oo Xildhibaanada uga imaan karta sida uu sheegay.
Hadalka Xildhibaanka ayaa imaanaya iyadoo ay jirto Wasiiro katirsanaa Xukumaddii hore iyo Xildhibaano Baarlamaanka kamid ah oo raadinaya in ay Wasiir ka helaan Xukumadda Mr Sharmaake.
Topnews:-Liiska Wasiiradda Beesha Habargidir iyo Duduble – Magacyada iyo Xilalka ?